किन्न Psorilax क्रीम: एन्टि-सोरायसिस मलम | सौन्दर्य समीक्षा
Psorilax क्रीम: एन्टि-सोरायसिस मलहम
Psorilax अनुहार र शरीरमा नाजुक र संवेदनशील छालाका लागि दैनिक क्रीम हो। क्रीमको संरचना लगभग पूर्ण प्राकृतिक छ, र यसैले यसले एपिडर्मिस बिल्कुल शान्त गर्दछ र यसको स्वर राख्दछ।
कहाँ किन्ने Psorilax र यो मूल्य हो?
संवेदनशील छालाको नियमित हेरचाहको लागि क्रीम सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीले बनाएको हो Hendelगार्डन Psorilax यो अहिले पसल, ब्यूटी सैलुन वा फार्मेसीमा किन्नु असम्भव छ। यसको कार्यान्वयन कम्पनी निर्माता मात्र गरिएको छ।
Hendels बगैचा एक युवा उभरती ब्रान्ड हो कि कस्मेटिक्सको क्षेत्रमा यसको नवीन विकासको साथ आफैंले प्रमाणित गरिसकेको छ।
जैविक दृष्टिबाट सक्रिय पदार्थहरूको प्राकृतिक शक्ति र कस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलोजीहरूमा नवीनताहरूको संयोजन गर्दै, कम्पनीले एक अद्वितीय उत्पादन गरेको छ Psorilax क्रीम
के हो Psorilax?
Psorilax दैनिक प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। यो विशेष गरी राम्रोसँग छालाको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ जुन संवेदनशील छ, ईरिटेशन वा रेशेसको प्रवण वा सजीलै छीलमा छ।
क्रीममा जैविक क्रियाशील पदार्थहरू छन् जसले खुजली र रातोपन हटाउन मद्दत गर्दछ, जबकि डर्मिसलाई सुखदायक पार्छ र सोरायसिसका लक्षणहरू र नतिजाहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ र बिरामीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो निम्त्याउँछ।
Psorilax प्राकृतिक तेल र मोम समावेश गर्दछ जसले छालालाई नकारात्मक बाहिरी प्रभावबाट बचाउँन मद्दत गर्दछ, यसलाई डिहाईड्रेसन र ड्राईनेसबाट रोक्न। क्रीम हाइपोलर्जेनिक भएकोले यसले सुगन्ध र सिंथेटिक घटक समावेश गर्दैन।
यसको नरम र हल्का बनावटका कारण, कस्मेटिक उत्पादन छालामा गुणात्मक समान तहमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, र छिटो अवशोषित हुन्छ र कुनै चिल्लो चिह्नहरू छोड्दैन। शाब्दिक केहि सेकेन्ड लागू पछि Psorilax तपाईंको अनुहारमा क्रीम, तपाईं प्रसाधन सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
को उपयोगी गुणहरू Psorilax
क्रीम छाला को नरम र हल्का स्केली क्षेत्रहरु मा नमी। यो छालामा कडा एपिडर्मिस भएको क्षेत्र वा छालाको रोगबाट प्रभावित ठाउँहरूमा उदाहरणका लागि सोरायसिससँग सम्बन्धित छ।
एपिडर्मिस पुन: उत्पन्न गर्दछ। यो Psorilax क्रीमले तपाईंको छालालाई रमाईलो महसुस गरी बाहिरबाट मात्र बाहिरीबाट इन्स्ट्रासेल्युलर स्तरमा पुन: स्थापना गर्दछ। यस्तो गहिरो पुनर्जननले तपाईंलाई ताजा र स्वस्थ उपस्थिति प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
सूजन र जलन हटाउँछ। अत्यधिक संवेदनशील छालाले अक्सर एलर्जी प्रतिक्रियाबाट ग्रस्त मानिसहरूलाई असर गर्दछ। त्यस्ता छालामा चकत्ते, रातो र विभिन्न साना जलनहरू असामान्य हुँदैनन्। Psorilax यसको सुखदायक प्रभावको कारण यी सानो त्रुटिहरू हटाउन मद्दत गर्दछ।
तनाव को भावना हटाउँछ, खुजली र जलेको। Psorilax क्रीमले छालालाई प्रभावकारी रूपमा नमी र नरम गर्दछ, जसले असुविधाबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
रगत माइक्रोक्रिकुलेसन सुधार गर्दछ। जैविक दृष्टिबाट सक्रिय पदार्थलाई धन्यवाद छ जुन क्रीम बनाउँदछ, रगतको माइक्रोक्रिकेसन, साथ साथै लिम्फ, छालाको सतह तहहरूमा सुधार गर्दछ। यसले एपिडर्मिसलाई आवश्यक पोषक तत्वहरू र माइक्रोइलिमेन्टहरू प्रदान गर्दछ। छालाको दृश्य सुधार र अधिक ताजा र स्वस्थ हुन्छ।
हल्का कीटाणुशोधन प्रभाव। क्रीमले एपिडर्मिसमा हल्का एन्टिसेप्टिक प्रभाव पार्छ, छालाका समस्याहरू - चकत्ते, सूजन र सोरायसिसको प्रभावहरू विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ।
एक पटक क्रीम छालाको सतहको सम्पर्कमा आएपछि यसले काम गर्न थाल्छ र डर्मिसलाई सक्रियतापूर्वक प्रभाव गर्दछ। नियमित प्रयोगको केहि दिनहरूमा, अवस्थाले अझ राम्ररी सुधार गर्दछ - यो सहज र रातो हुन्छ, दाग र एक्सीसिस गायब हुन्छ। को कोर्स प्रयोग Psorilax क्रीमले छालामा अझ बढी सकारात्मक प्रभाव पार्दछ - यो खनिज र पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण हुन्छ, छाला रोगहरू प्रतिरोधी हुन्छ र डर्मिसको पुरानो रोगहरू हराउँछ।
Psorilax निम्न लाभहरू समावेश गर्दछ: सुरक्षित hypoallergenic संरचना, पहिलो प्रयोग पछि छालाको सक्रिय एक्सपोजर, किफायती मूल्य, कुनै साइड इफेक्ट, सजिलो अनुप्रयोग, एक प्राकृतिक सुखद गन्ध, द्रुत अवशोषण, लुगामा कुनै ट्रेस छैन।
Psorilax पुरुष र महिला दुबैका लागि उपयुक्त छ, उमेर र छालाको अवस्थाको पर्वाह नगरी।
सामग्री र घटक Psorilax
को रचनाको आधार Psorilax डायहाइड्रोभानान्ट्रामाइड डी भनिने एक नवीन कम्पोनेन्ट हो। यसलाई धन्यवाद छ कि यसले ओसिलोपन र राहत कम गर्ने प्रभाव प्राप्त गर्दछ। थप रूपमा, तयारीमा वनस्पति तेलहरू र जैविक रूपले सक्रिय पदार्थहरू हुन्छन् जसले छालाको डिहाइड्रेशन रोक्छ, यसलाई नरम बनाउँदछ र सजिलो महसुस दिन्छ।
कम्पनी Hendelको बगैचाले क्रीमको एक प्रभावकारी सूत्रको व्युत्पन्नमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ। तलको रचना हो Psorilax र मुख्य सक्रिय सामग्री:
डायहाइड्रोभेन्थ्रामाइड डी। यो औषधि को एक प्रोटीन घटक हो। पदार्थ ओट गेडाहरूबाट झिकिन्छ। यस बोटको सबै उपचार गुणहरू अवशोषित गरेपछि, यस तत्वले डर्मिसको बिग्रिएको क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, तिनीहरूलाई निको पार्छ र जलनलाई उदाizing्ग पार्छ।
Rapeseed तेल निकासी। यो Psorilax घटकले एपिडर्मिसमा सुरक्षात्मक संयन्त्रहरू बनाउँछ जुन थ्रोम्बस गठनको तटस्थताको लागि जिम्मेवार हुन्छन्। थप रूपमा, पदार्थले छालाको माथिल्लो तहहरूमा रक्त संचार सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
क्यान्डेलिला मोम। यसको मुख्य सम्पत्ति डर्मिस कोशिकाको द्रुत पुन: निर्माणमा मद्दत गर्दछ। यसले चाँडै छालाको अखण्डतालाई पुनर्स्थापित गर्दछ र सजिलो एन्टिसेप्टिक प्रभाव प्रदान गर्दछ, यसैले सूजनको घटनालाई रोक्दछ।
पेन्थेनोल। यो पदार्थ बिना, यो प्रभावकारी छालाको पुनर्जनन कल्पना गर्न गाह्रो छ। पेन्थेनोलको प्रभावमा, एपिडर्मिस नरम हुन्छ, चाँडै स्वस्थ उपस्थिति प्राप्त गर्दछ।
करिट तेल (शिया बटर)। उपयोगी पदार्थहरूको सम्पूर्ण जटिल समावेश गर्दछ, जुन सक्रिय रूपमा छालामा समाहित हुन्छ। यो तेल, जो भित्र छ Psorilax, प्राय: कस्मेटिक तयारीको मुख्य अंश हो। यसले छालाको प्रारम्भिक वृद्धावस्थालाई रोक्नको लागि डर्मिसलाई प्रभावकारी रूपमा नमी र पोषण दिन्छ।
प्रयोगको लागि निर्देशन Psorilax
कुनै पनि कस्मेटिक क्रीम जस्तै, Psorilax सफा छालामा नरम प्याटि .्ग आन्दोलनको साथ लागू हुन्छ।
तलको प्रयोगमा चरण-देखि-चरण गाइड छ Psorilax:
उत्पादन लागू गर्नु अघि तपाईंको अनुहार राम्ररी धुनुहोस्। यो एक सफ्ट जेल को उपयोग गर्न सिफारिश गरीन्छ अधिकतम pH स्तर को साथ साबुन भन्दा।
अनुहारमा थोरै मात्रामा क्रीम वितरण गर्नुहोस् र छाला तान्ने बिना हल्का रूपमा रगनुहोस्। पूर्ण शोषणको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
10-15 मिनेट पछि, नरम कागज तौलियाको साथ उत्पादको अवशेषहरू हटाउनुहोस्, गोलाकार चालहरू बनाउनुहोस्।
दिनमा दुई पटक क्रीम प्रयोग गर्नुहोस् - बिहान र साँझ।
यदि तपाइँ छालाको समस्याहरू हटाउन कोर्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईले कम्तिमा एक महिनाको लागि यो काम गर्नुपर्दछ दिगो परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि।
Psorilax फाउंडेशन र मेक-अप अन्तर्गत प्रयोग गर्न सकिन्छ - यसले कुनै चमक वा ट्रेस छोड्दैन।
Psorilax एक अद्वितीय उत्पादन हो जुन बाह्यत्वको मा सामान्य कमीहरू जस्तै सुख्खापन, जकडापन, छीलो, जलन र जलन हटाउन मद्दत गर्दछ। यो dermatological रोगहरु संग लड्न पनि प्रभावी छ।